Nkuzi: Mepụta LiveUSB na ọnụ ya | Site na Linux
Nkuzi: Mepụta LiveUSB na Terminal
E nwere ụzọ dị iche iche iji mee LiveUSB na Linux, otu n'ime ha bụ iji Unetbootin, nke KZKG ^ Gaara mere nkuzi Otee aka.
Wayzọ ọzọ a ga - esi mee ya bụ site na ọnụ, n'ụzọ a anyị anaghị etinye obere mmemme ma ọ bụ chorraditas na ihe ha na - eme bụ iwere ohere na diski ike.
Ka anyị gaa ebe ahụ:
Ozugbo anyị nwere ISO ebudatara, ihe mbụ anyị na-eme bụ itinye nchekwa ebe anyị nwere ISO na ọnụ ya:
ma ọ bụ (ọ bụrụ na ụdị ahụ enye anyị njehie)
Ozugbo anyị ruru, anyị na-ahụ ndepụta nke faịlụ iji nyochaa na anyị edozighi folda ahụ:
Ugbu a anyị na-eme:
nke = / dev / sdb Ọ bụ ụzọ nke ngwaọrụ USB dịka ọ na-agbanwe tupu m gbanwee ya, m nwere ike ikwu na ịnwale dị ka nke a, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ anyị gbanwere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Nkuzi: Mepụta LiveUSB na Terminal
Nke a bụ usoro kachasị mma iji mepụta eriri USB. Ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma karịa ihe ọ bụla graphic ngwá ọrụ.
pd: Ndo maka ndozi ederede, xD.
Maka oge mbụ m ga-agbaghara gị ma oge ọzọ ị ga-aga ozugbo na RAE hahahahaha
Otu ajụjụ: na usoro a ị nwere ndụ-USB na nhọrọ buut (grub ma ọ bụ iji) tinye n'otu ụzọ ahụ iso maka cd / dvd? M na-ajụ gị ihe kpatara m ji mee ya mgbe ụfọdụ ma mgbe m bidoghachiri ọ tụfuru njehie, n'ikpeazụ m ga-ejikwa unetbootin ... nke na-eji syslinux.
Agbalịrị m ya mana ihe mere m bụ na kọmputa enweghị nhọrọ ịpụ site na USB ma ọ bụ na amaghị m otu esi ahazi ya na BIOS.
Agbanyeghị, echere m ee mana enweghị m ike ikwenye ya
Ihe bios ebidoghi m na web-live kwa, ma enweghi ike hazie ya.
Achọpụtara m nke a (buut njikwa) http://www.plop.at, nke na-ere ya ọkụ na cd ma na-enye ohere ịmalite site na USB.
Plop siri ike ịhazi, aghaghị m iji ya otu oge na ihe ọ bụla, enweghị m ike
Naanị ihe m dere na cd na nanị site na ịmalite site na CD ị nwere ike ịpụ na eriri
Mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị na n'ime Plop enwere ọtụtụ ọdịiche ma agara m iwere nke kachasị sie ike
Nke a na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na iso abịa njikere buut site USB, ma ị ga-arụ ọzọ nzọụkwụ.
Dịka ọmụmaatụ, oge ikpeazụ m gbalịrị ime nke a site na debian usoro ndị ọzọ achọrọ (agbabeghị m ụdị nke kachasị ọhụrụ), otu na nke mbụ arch iso's.
Javier Fonseca dijo
Kedu ihe ndị ọzọ achọrọ? Enwere m nsogbu ahụ.
Zaghachi Javier Fonseca
Ọ ga-enyere ọtụtụ n'ime anyị aka ịmata ihe ị na-eche site n'ime mgbanwe ụfọdụ na ọdịnaya nke iso oyiyi nke onye chọrọ ime ka a bootable eriri, ị nwere ike maa na-ahụ na ngwa dị ka Unetbootin-eme mgbanwe na faịlụ Ọdịdị n'ihi ya egbu oge iji wuo eriri bootable.
Maka ugbu a, m ga - eji Unetbootin kwadoo iso m na USB, na - ejighi DD nke mere ka ahapụ ihe achọrọ n'ihi na m nwara ya na enweghị nsonaazụ ọzọ karịa ọdịda dara ada na nzukọ USB.
Usoro a dị mma mgbe anyị nwere ngwakọ iso na anyị maara na site na ịde ederede na njedebe, adreesị nke onwe nke iso
Ọ bụrụ na ọ bụghị ngwakọ ọ naghị arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ ọ mere m na iso nke lmde, otu nke ụlọ debian na nke bsd.
Echere m na ị ziri ezi. Enwere ozi ndị ọzọ gbasara ihe oyiyi ngwakọ ISO na mpaghara ntụpọ linuxmint dot com / tutorial / view / 744 na wiki dot geteasypeasy dot com / Hybrid_ISO / IMG_format
Zaghachi na Saleskayark
M na-ejikarị usoro a eme ihe maka isos na-enye m nsogbu site na iji ngwa ndị a na-emebu, dị ka OpenSUSE dịka ọmụmaatụ
Zaghachi David Segura M
Ndewo, m na-agbalị ịwụnye winxp site na usb na ubuntu, m na-ahazi bios ka ịmalite site na hd na-ewepu (nhọrọ ịmalite site na USB apụtaghị, mgbe m wụnye ubuntu ọ pụtara) pc na-agbanye na mgbe ọ dị ka ntinye xp ga amalite I ga enweta 2 na blinking dash. Site na ya anaghị eme eme.
Achọrọ m ịgbanwe gaa na xp ọzọ n'ihi na anaghị m ekpochapụ Ubuntu na m na-eme nzuzu!
Daalụ nke ukwuu maka itinye uche gị.
Nnọọ Oscar (Ọzọ maka nchịkọta: D):
Ana m akwado ka ị gaa ọgbakọ anyị iji nweta enyemaka kacha mma 😀
Ọ bụrụ na ịmara ụzọ ebe iso dị, ị ga - eme:
dd ma ọ bụrụ = / ụzọ / to / file.iso nke = / dev / sdX
Na, ebe dd egosighi ọganihu, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ebe ọ na-aga, na-eme nke a, anyị nwere ike ime ya:
Na dd_rescue ma ọ bụrụ na ọ na-egosi ogwe ọganihu, na emepeuse wiki nke mbụ enwere usoro na dd, mgbe ahụ ha gbanwere ya dd_rescue
Ma ọ dịkarịa ala na Debian mba
Ezigbo uru c:
Ikwesiri inyocha uzo usb na fdisk -l
Daalụ nke ukwuu!! Enweela m Debian 8 na LXDE na enwere m ụfọdụ chinchi, enwebeghị m ike ịwụnye Unetbootin na amaghịzi m otu esi eme LiveUSB, ekele maka nke a, m ga-enwe ike ịtinye OS ahụ
Ana m arịọ unu niile mgbaghara maka ihe m ga-ekwu, mana nkuzi a bụ ezigbo ndị nwe blọọgụ m si Fromlinux.net, bụ FAKE, ya mere ọ jọgburu onwe ya n'ihi na dị ka ọtụtụ peeji ndị ọzọ, nkuzi vidio blọọgụ, ọ dịghị ihe ọzọ ha na-eme ihe Nke ahụ dị njọ, a na m agwa ha ka ha nwaa ma m nwalere ọzọ na-ele ma na-ele anya, mana achọtara m ọdịda na usoro ahụ n'ihi na mgbe m mecharachara usoro niile akọwapụtara ebe a…. N'ihi ya, enwetara m otu ọdịnaya nke iso nke na-adịghị arụ ọrụ mgbe ọ na-arụ ya na USB, ọ ga-abụ bootable, na-eji GRUB ma ọ bụ LILO, ma ọ bụ syslinux (ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ m na-amaghị eziokwu ahụ) ) nke ahụ ga - eme ka anyị si na USB buut.
Ọ bụ ya mere m ji akwado ndị niile na - agụ akwụkwọ, ọ bụrụ na ha ejiri linux ma ọ bụ windo, jiri Unetbootin nke ga - eme ihe niile m kwuru n’elu, ọ bụghị naanị na - edepụta ọdịnaya nke iso na USB kamakwa ọ na - ebu bootable (nke bụ ihe ha chefuru ikwu maka ndị nkụzi anyị.)
Enyi, nke a na-arụ ọrụ, n'ihi na m na-arụ ọrụ m LiveUSBs mgbe mgbe na otu usoro a. Unetbootin na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe MA, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma ma a bịa na Ubuntu.
Daalụ KZKG ^ Gaara maka echiche gị, eziokwu bụ na m nwara ọtụtụ oge, na-anwa ime ya na CraunchBang, Debian, Slax, na kali, eziokwu bụ na enweghị onye m nwere ike ime ya, site na usoro a, ịgafe ihe niile ọdịnaya site na iso na USB site na iji ngwa DD.
Angel lavin dijo
hi, hey mgbe ụfọdụ ọ naghị arụ ọrụ, gịnị kpatara nke ahụ ji eme?
Zaghachi Angel Lavin
IHE: Mgbe ịmalite usoro ị na-ekwesịghị iwepụ otu, mechie ọnụ ma ọ bụ mechaa ya tupu ị gwụchaa n'ihi na ọ nwere ike imebi ya.
Julio Hernandez dijo
Maka ndị mbido dị ka m, na Ubuntu 20.04, ọ dị mkpa ịgbakwunye iwu "sudo" ka ọ rụọ ọrụ, nke mere na iwu zuru oke dị ka nke a:
sudo dd ma ọ bụrụ = isoname.iso nke = / dev / sdb
O were m nkeji ole na ole iji gụchaa, mana ọ gosipụtara ... daalụ maka usoro gị enyi!
Zaghachi Julio Hernández
Dropbox ma ọ bụ Sparkleshare?
Desktọpụ Linux Linux kacha mma (Jan / 12)